Ngaba uyafuna ukubona iwebhusayithi ye-Apple ngo-2001? Umatshini obuyela emva uyakuvumela | Ndisuka mac
Ngaba uyafuna ukubona iwebhusayithi ye-Apple ngo-2001? Umatshini obuyela emva uyakuvumela
Kwaye ayisiyiyo kuphela iwebhusayithi ye-Apple ekhoyo kule datha inkulu siyifumana kumnatha, singatyelela naliphi na iphepha elenzekayo kuthi, nokuba ndivela eMac. Ewe, kwimeko yokuba ndivela eMac kufuneka sihambe kude kube nguJanuwari 2008 eyayingumzuzu wokuzalwa kwakhe (ibonisa umfanekiso ongasentloko).
Kwimeko nayiphi na into sifuna ukwabelana nawe namhlanje Ayisiyo isicelo uqobo, kodwa ayisiyiyo iwebhusayithi eqhelekileyo nokuba, kuyo siya kufumana onke amaphepha ewebhu kunye noko kubonwe kuwo ngawo nawuphi na umhla. Inokuba luncedo kwiimeko apho kuya kufuneka sibone amaxabiso okanye thelekisa iimodeli zeMac kunye nezangoku, ii-iPhones okanye ezifanayo ...
Le projekthi inomdla njengesikhumbuzo kubasebenzisi abaninzi kwaye unokhetho lokubona iinkcukacha okanye utshintsho olubalulekileyo kumaphepha ewebhu kwiminyaka eyadlulayo nale ikhoyo ngoku. Uhlengahlengiso kwaye ayisiyiyo imveliso eboniswe kwiwebhusayithi ye-Apple enomdla. Apha ngezantsi sishiya umzekelo we Iwebhusayithi esemthethweni ka-Apple ngo-2001 apho kungabonakali i-iOS:
Ngaphandle kwamathandabuzo, kunokuba yinto enomdla kakhulu "ekuchitheni ixesha" kolu khangelo lunokwenziwa kuyo nayiphi na iwebhusayithi esinokucinga ngayo. Kule meko siwubonile umzekelo wewebhusayithi ye-Apple eSpain, kodwa singatyelela iwebhusayithi yaseMelika okanye ilizwe esifuna lona. phambili ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukukhangela le webhusayithi, Ngokucacileyo ayisiyiyo yonke into eza kusebenza nge-100% kodwa inomdla wokucofa kwiikhonkco ukubona kunye nokuhambahamba kwiwebhu.
Isebenza njani okanye uhamba kanjani
Oku kulula kakhulu kwaye kulula singena kwisiza ngokuthe ngqo kule khonkco kwaye ngokuthe ngqo kufuneka sichwetheze i-URL yewebhu esiyifunayo, kwimeko yethu sibeka http://www.apple.es kodwa singabeka nantoni na esiyifunayo. Emva koko sibona umgca womsebenzi wewebhusayithi uqobo okanye into abakwaziyo ukuqokelela kule datha enkulu, ikhalenda enegrafu ibonisa ukuba uqale nini umsebenzi kunye nakwiApple.es kubonakala ngathi owawungo-Okthobha 23, 1996 ngesihloko esamkelekileyo: Wamkelekile kuApple
Ngayiphi na imeko, sisixhobo esihle kakhulu kwiimeko ezithile. ukugcina yonke imixholo html yekhowudi yemvelaphi kwaye ngaloo ndlela kugcinwa ulwazi oluninzi kangangoko. Ngamanye amaxesha iwebhu inokungqubeka okanye ukulayisha umxholo uyacotha, kodwa isebenza kakuhle. Ubumazi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ngaba uyafuna ukubona iwebhusayithi ye-Apple ngo-2001? Umatshini obuyela emva uyakuvumela
Umdlalo weHitman woHlelo loNyaka uzisa namhlanje kubasebenzisi beMacOS